हिमाल खबरपत्रिका | व्यर्थको यात्रा!
नेपालले दूत पठाउँदैमा भारतले हठ त्याग्ला भन्नेमा रत्तिभर विश्वास छैन। पहिले पनि प्रदीप ज्ञवाली र कमल थापा प्रधानमन्त्रीका दूत बनेर दिल्ली गएकै हुन्। तिनले केही पार लगाउन सकेनन्। त्यसैले 'तेस्रो दूतको दिल्ली यात्रा' (२४ माघ–१ फागुन) प्रति म आशावादी छैन।
भारतीयसँग 'डिल' निष्कर्षमा अझै नपुग्नुले हाम्रो कूटनीतिक अक्षमता देखाएको छ। आगामी दिनमा हाम्रा मन्त्रीगणलाई कूटनीतिसम्बन्धी विशेष तालीम नै दिइओस्।
अतुलनीय ल क्याम्पस
नेपालको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक संस्थाप्रति सबैले गुनासो मात्र गर्दै आएका थिए। पत्रपत्रिकामा पनि बढीजसो नकारात्मक समाचार नै पढियो। तर, यसपालि 'जोगिएको ब्रान्ड' (२४ माघ–१ फागुन) मा ल क्याम्पसबारे सकारात्मक र प्रेरणादायी लेख पढ्न पाउँदा खुशी लाग्यो। यो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा पनि पुरानो भन्ने थाहा पाउँदा त म छक्कै परें। कानूनी शिक्षामा साँच्चीकै अतुलनीय रहेछ ल क्याम्पस। सन्देश पन्त, इमेलबाट
एनसेलभित्रको कुरा बुझन सकिएन। 'विवाद के र कसरी' (२४ माघ–१ फागुन) पढेपछि दिमाग नै फन्फनी घुम्यो। तर, यो रिपोर्ट छापिएको पृष्ठको डिजाइन भने आकर्षक लाग्यो। एनसेलकै रङ र विज्ञापन शैलीमा एनसेलको स्वामित्व संरचना देखाइएको रहेछ। यो व्यंग्यात्मक र सिर्जनात्मक लाग्यो।
अन्वेषण श्रेष्ठ, इमेलबाट
महामारीप्रति लाचार सरकार
सरकारसँग कुनै पनि संकटसँग लड्ने क्षमता नभएको देख्दा देश नै छाडेर हिंडौं जस्तो लाग्छ। विश्वका २१ देशमा देखिएको जिका भाइरसको महामारीविरुद्ध लड्न पनि सरकारले केही तयारी गरेको रहेनछ। त्यसमाथि क्रिमियन कंगो फिभर, वर्ड फ्लू, निप्पा भाइरसले आक्रान्त छिमेकी मुलुकको बीचमा बसेका हामी कुन वेला केको महामारीमा पर्छौं भन्ने टुंगो छैन। तर, सरकार सतर्क छैन। जनताले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुको विकल्प छैन।
जनक आचार्य, इमेलबाट
पुरोहित पुरातनवादी भन्ठान्थें। हुन पनि अधिकांश बाहुन बाजेहरू यौनलगायत विषयलाई पापको झोलीमा राख्छन्। तर, झापाका पण्डित युवराज गुरागाईं र गुणराज खतिवडाको प्रयास प्रशंसनीय लाग्यो। उनीहरूले पुराणमै सुरक्षित यौनजीवनबारे जानकारी दिंदा रहेछन्। यस्ता सचेतनाले यौनजन्य हिंसामा समेत कमी ल्याउन सक्छ।
अम्बिका त्रिपाठी, इमेलबाट
भोलिका स्टारलाई बधाई!
पछिल्ला केही चलचित्रमा सहायक भूमिकामा देखिएका बुद्धि तामाङ, विजय बराल, विपिन कार्की र कामेश्वर चौरसिया जस्ता कलाकारको संघर्षको कथा पढ्दा भावुक बनें। हिजो दुःख गरेकैले उनीहरू दर्शक रिझाउन सक्ने भएका हुन्। विगतको अनुभव नै वर्तमान सपार्ने आधार बन्छ। तसर्थ 'भोलिका स्टार' (२४ माघ–१ फागुन) लाई बधाई तथा अग्रिम शुभकामना!
भीम चापागाईं, इमेलबाट
अहिलेका सहायक कलाकार मुख्य कलाकारभन्दा तगडा देखिन्छन्। 'छड्के' चलचित्रमा मुख्य पात्रका रूपमा देखिएका सौगात मल्लभन्दा विपिन कार्की र कामेश्वर चौरसियाले कम दमदार अभिनय गरेका छैनन्। राम्रो अभिनय गर्नेलाई लिड रोल नै चाहिंदैन भन्ने पुष्टि यी कलाकारले गरेका छन्।
नीता कोइराला, इमेलबाट